बिरामी श्रीमतीलाई अस्पतालको बेडमै छोडी श्रीमान फ*रार ! श्रीमानलाई दिईन अन्तिम संदेश (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/बिरामी श्रीमतीलाई अस्पतालको बेडमै छोडी श्रीमान फ*रार ! श्रीमानलाई दिईन अन्तिम संदेश (भिडियो सहित)
कैलाली मोहना- १ घर भई हाल भक्तपुरमा बस्दै आएकी कोमला राम्जाली मगर एती बेला बिचल्लीमा परेकी छिन् । क्यान्सर पिडित कोमलालाई अस्पतालमा छाडेर श्रीमान अचानक बेपत्ता भएपछि बिचल्लीमा परेकी हुन् । डेढ वर्षदेखि रगतमा इन्फेक्सन भएर पेटबाट सुरु भएको ट्युमर घाँटीसम्म फैलिएको थाहा भएपछि उनलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । श्रीमानले पहिला लगभग १४ लाख खर्च गरेको र केही महिनादेखि सम्पर्क बिहिन भएको बताएकी छिन् ।
पैसा अभावका कारण अहिले उपचार नगरी बसिरहेकी कोमलाको कोठा भाडा र उपचार खर्च जुटाउन निकै गाह्रो भएको बताउँछिन् । श्रीमानले बिदेशमा कमाएको पैसा क्यान्सरको नाटक गरेर सिध्याएको भनि आरोप पनि लगाएको उनले बताईन् । उनका श्रीमानले अनेक यातना पनि दिने गरेको र त्यस पश्चात अस्पतालको बेडमा एक्लै बस्नु परेको सुनाईन् । बाँकी भिडियोमा हेर्नुस् :
घरमा भएका परिवारका सदस्य पनि विहानै उठेर हिड्छन् घरकी सुत्केरीलाई खान दिने वास्ता पनि गर्दैनन् । सामाजिक संजालमा भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनलाई अहिले सहयोग गर्नेहरु घरमै पुगेका छन् । कपडा र खानेकुराहरु लिएर गएका सहयोगीहरुलाई उनले धन्यवाद दिएकी छन् ।
सुत्ने बेला हलेसी महादेवको दर्शन गरि भोलीको राशिफल पढ्नुहोस्